ဘမောင်ချိန်၊ မစ္စစ် - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၈ မတ် ၁၉၅၂ – ၄ မတ် ၁၉၅၃
၁ ဇွန် ၁၉၀၅
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄၊ ၁၉၉၄(1994-02-24) (အသက် ၈၈)
မစ္စစ် ဘမောင်ချိန် (အပျိုအမည် - ကလယ်ရီဘဲလ် အိုင်ရင်း ဖိုး၊ အင်္ဂလိပ်: Claribel Irene Po) (၁၉၀၅-၁၉၉၄) သည် ကရင်လူမျိုး ဝန်ကြီးဟောင်း ဖြစ်သည်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဘမောင်ချိန်၏အမည်နှင့် ထင်ရှားခဲ့သည့် ပထမဆုံး ကရင်ပြည်နယ်ဌာနဝန်ကြီး ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော အစိုးရအဖွဲ့၌ ပါဝင်ခဲ့သည့် ပထမဆုံး အမျိုးသမီးဝန်ကြီးလည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။
ပုသိမ်မြို့တွင် ဒေါက်တာ စံစီဖိုး (San C. Po) (၁၈၇၀-၁၉၄၆) နှင့် ဒေါ်အေမီလူနီ (Amy Loo-Nee)တို့မှ ၁၉၀၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့၌ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ မွေးချင်း ၇ ဦးအနက် ပဉ္စမမြောက်ဖြစ်သည်။
မိဘများမှာ ကရင် ပညာတတ်လူတန်းစားများဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန်နှင့် အမေရိကန်သို့ သွားရောက် ပညာသင်ဖူးသည်။ မိခင်မှာ ၁၈၈၄ ခုတွင် ဖွဲ့သည့် ကရင်အမျိုးသားအသင်း (Karen National Association) ၏ တွဲဖက်တည်ထောင်သူ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအသင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပထမဆုံးသော နိုင်ငံရေးအသင်းအဖွဲ့ ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငယ်စဉ်က မိခင်၏ အေဘီအမ် သာသနာပြုကျောင်းတွင် ပညာသင်ယူဆည်းပူးခဲ့၏။ ၁၉၂၈ ခုနှစ်တွင် ဂျပ်ဆင်ကောလိပ်မှ အင်္ဂလိပ်စာပေ အဓိကဖြင့် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ ရသည်။
ဘွဲ့ရပြီးနောက် ပုသိမ်၌ပင် ဆရာပြန်လုပ်သည်။ ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဆရာဖြစ်သင်ကောလိပ်မှ လက်မှတ်ရရှိပြီး အထက်တန်းပြဆရာမအဖြစ် ဝင်လုပ်သည်။
၁၉၃၅ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်၌ ပညာသင်ခဲ့သည့် လမ်းအရေးပိုင် ဦးဘမောင်ချိန်နှင့် လက်ထပ်ခဲ့ရာမှ မစ္စစ်ဘမောင်ချိန်ဟု ထင်ရှားလာသည်။ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက် ပုသိမ်၊ ပခုက္ကူနှင့် ရန်ကုန်မြို့များတွင် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့သည်။
သမီး ၂ ယောက် မွေးခဲ့ရာ နှစ်ဦးစလုံး ဆေးပညာ သင်သူများပင် ဖြစ်သည်။
၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်း တိုက်ပွဲဖြစ်နေသော ကရင် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များနှင့် ဖဆပလအစိုးရအကြား ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ထင်ရှားခဲ့ပြီး ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ကရင်ပြည်နယ်ထူထောင်သောအခါ ကရင်အစိုးရအဖွဲ့ (Union Karen League) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာသည်။
၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် ပထမဆုံးရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပကာ အနိုင်ရအမတ်များနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့သည်။ မစ္စစ်ဘမောင်ချိန်က ဟံသာဝတီခရိုင်မှ အရွေးခံရပြီး အောက်လွှတ်တော်အမတ် ဖြစ်လာသည်။ ဤတွင် ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။ ထိုစဉ်က နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်သည် ဦးနု ဖြစ်သည်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ကရင်ပြည်နယ်ဌာနဝန်ကြီးအဖြစ် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးဘဦးရှေ့မှောက်၌ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့သည်။ လက်နက်ကိုင် ကရင်လူငယ်များကို ဥပဒေဘောင်အတွင်း ဝင်ကာ ပြည်နယ်တိုးတက်ရေး၌ ပူးပေါင်းစေရန် အဓိက အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။
ဝန်ကြီးဖြစ်ပြီး တနှစ်အကြာ ၁၉၅၃ ခု၊ မတ်လ ၄ ရက်တွင် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်သည်။ အင်္ဂလန်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် လုပ်ကိုင်ရန် ကမ်းလှမ်းသော်လည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကန့်ကွက်သဖြင့် ငြင်းပယ်လိုက်သည်။
၁၉၅၁ ခုကတည်းက ခရစ်ယာန်ကလျာဏယုဝအသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခရစ်ယာန်ကလျာဏယုဝအသင်း၏ အမှုဆောင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောင်သော် အာရှတိုက်လုံးဆိုင်ရာ ခရစ်ယာန်အသင်း၏ ဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ခရစ်ယာန်ဘာသာပြန့်ပွားရေးကို အာရုံစိုက်လုပ်ကိုင်သွားသည်။ 
၁၉၆၁ ခုတွင် ဗမာပြည်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းများကောင်စီ (Burma Council of Churches) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာသည်။
၁၉၉၄ ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သည်။ 
↑ YWCA is honored to have Mrs. Ba Maung Chain။ Young Women Christian Association။ ၆ မေ ၂၀၁၆ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ မြန်မာ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးဝန်ကြီး မစ္စစ်ဘမောင်ချိန်။ ဧရာဝတီ။
↑ Getrud Wellmann-Hofmeier (3 Oct 2018) "Claribel Ba Maung Chain (Irene Po) (1905-1994)". Myanmar-Institut.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘမောင်ချိန်၊_မစ္စစ်&oldid=473322" မှ ရယူရန်